U socdaalaya Mareykanka? Tallaabooyinka xudduudaha COVID ayaa jira marka aad ku laabato Kanada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » U socdaalaya Mareykanka? Tallaabooyinka xudduudaha COVID ayaa jira marka aad ku laabato Kanada
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
U socdaalaya Mareykanka? Tallaabooyinka xudduudaha COVID ayaa sii jira marka safarradu ku noqdaan Kanada.
Deganeyaasha Kanada waxay ka hubin karaan gobolkooda ama territorigooda inay helaan caddaynta tallaalka COVID-19 si ay ugu fududaato ku noqoshada Kanada.
Socdaalayaashu waa inay hubiyaan inay xaq u leeyihiin inay Kanada galaan oo ay buuxiyaan dhammaan shuruudaha gelitaanka ka hor intaysan tagin xadka.
Dadka safarka ah ee si buuxda u talaalan oo u qalma inay soo galaan Kanada waxay sii ahaanayaan in lagu qaado imtixaan random ah oo khasab ah markay yimaadaan.
Tijaabooyin antigen, oo inta badan loo yaqaan "baaritaannada degdega ah", lama aqbalo.
Noofambar 8, 2021, Maraykanku wuxuu bilaabi doonaa u oggolaanshaha dadka safarka ah ee si buuxda u tallaalay Kanada inay ku soo galaan Maraykanka dhulka iyo meelaha doomaha laga soo galo sababo macquul ah (aan muhiim ahayn), sida dalxiiska.
Hay'adda Adeegyada Xuduudaha ee Kanada waxay jeclaan lahayd inay xasuusiso socotada in tillaabooyinka xuduudaha ay sii jiraan dadka safarka ah ee soo galaya ama ku noqonaya Kanada iyo inay helaan wargelin oo ay fahmaan waajibaadkooda markay samaynayaan qorshahooda safarka.
Socodayaashu waa inay hubiyaan inay xaq u leeyihiin inay galaan Canada oo buuxi dhammaan shuruudaha gelitaanka ka hor intaadan tagin xadka. Deganeyaasha Kanada waxay ka hubin karaan gobolkooda ama territorigooda inay helaan caddaynta tallaalka COVID-19 si ay ugu fududaato ku noqoshada Kanada.
Dadka safarka ah ee si buuxda u talaalan ee imanaya Kanada waa inay dhammaystiraan imaanshaha qasabka ah ee imaanshaha ka hor tijaabada COVID-19 oo ay soo gudbiyaan macluumaadkooda qasabka ah oo ay ku jiraan caddayntooda dhijitaalka ah ee tallaalka Ingiriisi ama Faransiis iyagoo isticmaalaya bilaash ImaanshahaCAN (App ama website) 72 saacadood gudahood ka hor inta aanad iman Canada. Tijaabooyin antigen, oo inta badan loo yaqaan "baaritaannada degdega ah", lama aqbalo. Dadka safarka ah ee si buuxda u talaalan oo u qalma inay soo galaan Kanada waxay sii ahaanayaan in lagu qaado imtixaan random ah oo khasab ah markay yimaadaan.
Safarada gaagaaban, ee ka yar 72 saacadood, muwaadiniinta Kanada, dadka ka diiwaan gashan sharciga Hindiya, deganayaasha joogtada ah iyo dadka la ilaaliyo ee u safraya Maraykanka ayaa loo oggol yahay inay qaataan imtixaankooda unugyada ka hor intaanay iman ka hor intaanay ka tagin Kanada. Haddii baaritaanku uu ka badan yahay 72 saacadood marka ay dib u soo galaan Kanada, waxaa looga baahan doonaa inay helaan shaybaar cusub oo imaanshaha ka hor gudaha Mareykanka.
Socotada aan la tallaalin ama qayb ahaan la tallaalin kuwaas oo u qalma inay galaan Canada waa in ay sii wadaan raacitaanka imaatinka ka hor, imaatinka iyo maalinta-8 sharuudaha baaritaanka molecular COVID-19, iyo karantiil muddo 14 maalmood ah.
Dadka safarka ah waxaa laga yaabaa inay la kulmaan dib u dhac ku yimaada dekedaha laga soo galo sababtoo ah tillaabooyinka caafimaadka dadweynaha maadaama CBSA aysan wax u dhimi doonin caafimaadka iyo badbaadada Kanadiyaanka aawadood waqtiyada sugitaanka xadka. CBSA waxay uga mahadcelinaysaa socotada wada shaqayntooda iyo dulqaadkooda.
Dhammaan su'aalaha ku saabsan gelitaanka Mareykanka iyo shuruudaha caafimaadka, waa in lagu jiheeyaa Kastamka iyo Ilaalinta Xuduudaha Mareykanka.